Pakcoin စျေး - အွန်လိုင်း PAK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pakcoin (PAK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pakcoin (PAK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pakcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
PAK – Pakcoin
Market ကဦးထုပ်: $139 393.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pakcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pakcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PakcoinPAK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00157PakcoinPAK သို့ ယူရိုEUR€0.00133PakcoinPAK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0012PakcoinPAK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00144PakcoinPAK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0143PakcoinPAK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00994PakcoinPAK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0349PakcoinPAK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00586PakcoinPAK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0021PakcoinPAK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0022PakcoinPAK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0358PakcoinPAK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0122PakcoinPAK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00834PakcoinPAK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.118PakcoinPAK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.262PakcoinPAK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00216PakcoinPAK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00238PakcoinPAK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0488PakcoinPAK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.011PakcoinPAK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.166PakcoinPAK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.88PakcoinPAK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.596PakcoinPAK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.116PakcoinPAK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0437
PakcoinPAK သို့ BitcoinBTC0.0000001 PakcoinPAK သို့ EthereumETH0.000004 PakcoinPAK သို့ LitecoinLTC0.00003 PakcoinPAK သို့ DigitalCashDASH0.00002 PakcoinPAK သို့ MoneroXMR0.00002 PakcoinPAK သို့ NxtNXT0.13 PakcoinPAK သို့ Ethereum ClassicETC0.000221 PakcoinPAK သို့ DogecoinDOGE0.452 PakcoinPAK သို့ ZCashZEC0.00002 PakcoinPAK သို့ BitsharesBTS0.0609 PakcoinPAK သို့ DigiByteDGB0.0599 PakcoinPAK သို့ RippleXRP0.00528 PakcoinPAK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 PakcoinPAK သို့ PeerCoinPPC0.00566 PakcoinPAK သို့ CraigsCoinCRAIG0.737 PakcoinPAK သို့ BitstakeXBS0.069 PakcoinPAK သို့ PayCoinXPY0.0282 PakcoinPAK သို့ ProsperCoinPRC0.203 PakcoinPAK သို့ YbCoinYBC0.000001 PakcoinPAK သို့ DarkKushDANK0.518 PakcoinPAK သို့ GiveCoinGIVE3.5 PakcoinPAK သို့ KoboCoinKOBO0.368 PakcoinPAK သို့ DarkTokenDT0.00145 PakcoinPAK သို့ CETUS CoinCETI4.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 19:15:01 +0000.